Ciidamada AMISOM oo kubado isboorti guddoonsiiyay cayaartooyda degmada Warta Nabadda “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Ciidamada AMISOM oo kubado isboorti guddoonsiiyay cayaartooyda degmada Warta Nabadda “SAWIRRO”
Tartan isboorti oo ku saabsan isdhexgalka bulshada ayaa loo qabtay cayaartooy ka socotay labo waax oo ka tirsan degmada Warta Nabadda, iyadoo cayaartii ay soo bandhigeen ay ahayd mid ay aad u jecleysteen dhamaan dadkii u soo daawasho tegay.
Cayaartooyda oo ka socotay Waaxyaha Jenaraal Daa’uud iyo Xamar Bile ayaa waxa ay ku soo idlaatay bar bar dhac 2-2, iyadoo gabo gabadii cayaarta ay ciidmada Nabadgelyada Midowga Afrika ee AMISOM, ay cayaartooyda shanta Waax ee ay ka koobantahay degmada guddoonsiiyeen kubado ay ugu talo galeen inay kaga qeyb qaataan tartamada Isboorti ee ku saabsan isdhexgalka bulshada.
Enas Kulala oo ah sargaal ka tirsan ciidamada booliska AMISOM oo hadal ka jeediyay ayaa sheegay in kubadaha ay ku wareejeen wakiilo ka tirsan shanta Waax ee degmada Warta Nabadda, isagoo xusay in tani ay kaga qeyb qaadanayaan sidii loo dhiiri gelin lahaa dhalinyarada jecel isboortiga.
Guddoomiyaha Degmada Warta Nabadda Yaasiin Ciise Nuur ayaa saraakiisha AMISOM uga mahadceliyay kubadaha ay ku wareejiyeen cayaartooyda Waaxyaha degmada, waxaana uu dhalinyarada ugu baaqay inay xoojiyaan tartamada isboorti ee nuucaani oo kale ah oo uu ku sheegay inay qeyb lixaad leh ka qaadan karto horumarinta amniga.
Guddoomiye Muungaab oo Nalal casri ah kuna shaqeeya cad cadeedda ka hirgeliyay Kaaraan “DAAWO+SAWIRRO”